Ukuphucula i-logo kunokuba lula kunokuba kubonakala | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iingcebiso ezimbalwa zokuphucula i-logo kunye nokwenza ukuba ikhetheke ngakumbi
UManuel Ramirez | | ILogos, Amaqhinga
Malunga nelogo Andizukufumanisa nto ayisaziwa, isazisi senkampani kwaye ibonelela ngomfanekiso iinkonzo okanye iimveliso ezinokubonelelwa ngazo.
Nangona oku kuyilo lwegraphic kunye nokuvela kwayo ngokukhawuleza, kulungile ukuhlala unolwazi ngalo lonke ixesha, kwaye ayisiyiyo into yokuba kufuneka siyitshintshe ngokupheleleyo ilogo yokuyihlaziya iye kumaxesha asichaphazelayo, kodwa ngamanye amaxesha kulungile ukucacisa kancinci okanye nokutshintsha isicatshulwa esihamba nayo. Nazi iingcebiso ezimbalwa zokuphucula ilogo.
Iingcebiso ziingcebiso ezimbalwa zoyilo lwegraphic ukuze sazi ukuba yintoni esinokuyifuna kwindalo Yintoni esinayo siqeshelwe ukuphucula ilogo yethu, okanye nokuzibeka kwiinjongo zokuyiphucula.
2 Guqula isicatshulwa
3 Uyilo olulula
Sinophawu lokuba endaweni yokuba yinto ethile elula kwaye encinci ihamba ngenye indlela. Singayicacisa ukuze umbono esifuna ukuwuveza ngawo ufikelele kumthengi ngokukhawuleza. UNike ngowona mzekelo ubalaseleyo apha ngezantsi.
Namhlanje Ubuncinci ngumkhwa, kwaye sinokunciphisa ukusetyenziswa kwemigca ukuze umbono oqhelekileyo we logo yethu ucace gca kangangoko kunokwenzeka. Ukuba ujonga iimveliso zefashoni ezinje ngeNike okanye iAdidas, iilogo zazo zilula kakhulu, ziyaguquka kunye nexesha.
Njengomfundi, uHugo, ucebisa, kukwakhona ukubaluleka kokuvuthwa kwi-brand evumela ukuguqulwa kwayo phantse kwinqanaba lokomfuziselo, ngaphandle kokulibala imvelaphi yayo, abo bazinzise ezingqondweni zethu ukuba yintoni uphawu kunye nemveliso.
Ukuba, nangasiphi na isizathu, asifumani ndlela "yokubeka isandla" kwi logo, mhlawumbi sisicatshulwa leyo kufuneka iphuculwe ngomthombo okhoyo ngoku kwaye ofikelela kolunye uhlobo lwabathengi njengabantu abancinci abaphambili. UPepsi ngomnye umzekelo kule meko.
Ukuba sinelogo esele iluphawu lwenkampani, kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba xa ilogo itshintshiwe, ikwayiyo inika umthengi intsingiselo yokuba ishishini lethu liya likhula ngokuhambelana namaxesha anamhlanje.
Isitayile esincinci nesilula singabamisa abathengi bethu njengoko inkampani yethu iqinisekisa kwakhona kwaye iyaqhubeka ikhula Ukubonisa amandla nokuzimisela.
Asinakufumana ndlela yokutshintsha isicatshulwa, ilogo ibonakala kuthi ukuba kufuneka ihlale injalo, kodwa Kuthekani ukuba silungisa umbala?
Uya kuba sele uyazi ukuba imibala ibonisa iimvakalelo okanye iimvakalelo. Kuxhomekeka kwinkonzo okanye kwimveliso esiyibonelelayo, okanye xa inkampani ikho, inokuba inomdla sebenzisa uluhlu oluthile lwemibala. Uluhlu lwemibala yomhlaba lunokuqhubeka nokuqinisekisa ubuchwephesha bethu, nangona iyakuhlala ixhomekeke kuluntu esijongana nalo.
Ngapha koko, ukuba asifumani ndlela yokuya kwelinye inyathelo ngokubhekisele kuyilo lwe logo yethu, utshintsho lombala lunokuthetha Ukuya kwinqanaba elitsha kwinkampani okanye kwinkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » ILogos » Iingcebiso ezimbalwa zokuphucula i-logo kunye nokwenza ukuba ikhetheke ngakumbi
Molo Manuel. Ndiyabulela kakhulu ngokwabelana.
Ndingathanda ukongeza umbono. Kwangelo xesha sithetha ngobuncinci, kufanelekile ukuqaqambisa amandla okuhlanganisa, kuba iimveliso ezinje ngeDisney, iPepsi, iCoca, iNike, okanye iAdidas, zinokubanakho ukunciphisa izinto zabo ukuya kuthi ga, ukuba ukubazi ukuba ngoobani, ngekhe siyiqonde nakancinci, ke kuluncedo ukubonisa ukuba kukho ukukhula okuthile kwi-brand kunye nokuma kwe-logo yayo, evumela ukubhengezwa phantse kwinqanaba lokomfuziselo.
Enkosi ngokuqwalaselwa kwaye kuyinyani malunga nokukhula kwi-brand kunye nokuma kwe logo yakho!
Izixhobo ezi-9 zokutshintsha iiFireworks zeAdobe
I-Adobe Illustrator: Iyintoni kwaye yenzelwe ntoni?